SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Zande Zulu
Ungaitei kuti uve pedyo naMwari? Tataura matanho anotevera aungatora kuti uve shamwari yepedyo yaMwari:
Ziva uye shandisa zita raMwari.
Gara uchitaura naMwari nemunyengetero uye uchidzidza Shoko rake, Bhaibheri.
Ramba uchiita zvinofadza Jehovha.
Swedera pedyo naMwari nokushandisa zita rake, kunyengetera kwaari, kudzidza Shoko rake, uye kuita zvinomufadza
Uchifunga izvi, ungati uri kutora matanho ekuti uve pedyo naMwari here? Unofunga kuti pane zvaunofanira kuvandudza here? Zvinonzwisisika kuti panoda kushanda nesimba, asi funga zvaunozowana.
“Kana munhu achiita zvose zvaanogona kuti ave shamwari yepedyo yaMwari anenge achishandira zviripo,” anodaro Jennifer wekuUnited States. “Kuva shamwari yaMwari kunoita kuti uwane makomborero akawanda. Unowedzera kuvimba naMwari, kunzwisisa nezvake, uye kutopfuura izvozvo, unowedzera kumuda. Hapana chinokosha kupfuura izvi muupenyu!”
Kana uchida kuva neushamwari hwepedyo naMwari, Zvapupu zvaJehovha zvichafara kukubatsira. Vanogona kuronga kudzidza newe Bhaibheri usingabhadhari. Unogonawo kuenda kumisangano yavo kuImba yeUmambo yekwaunogara, uye ikoko uchawadzana nevanhu vanokoshesa ushamwari hwavo naMwari. * Paunopinda misangano iyi, uchanzwa sezvakaita munyori wepisarema uyo akati, “Asi ini, kuswedera pedyo naMwari kwakandinakira.”—Pisarema 73:28.
^ ndima 9 Kuti ukumbire kudzidza Bhaibheri kana kuti uzive kune Imba yeUmambo iri pedyo nekwaunogara, taura nemunhu akakupa magazini ino kana kuti vhura nzvimbo yedu yepaIndaneti, www.jw.org/sn, wotarisa nechepasi pepeji yacho pakanzi TIBATEI PANO.